Netizen Report: Sary Mpanao Hatsikana Misy Soratra Mamazivazy ny Praiminisitra Mameno an’i Malayzia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2016 10:14 GMT
Miparitaka ny sary misy soratra amin'ny endrika mpanao hatsikana mamazivazy ny Praiminisitra Malayziana Najib Razak taorian'ny fandrahonana ilay mpanakanto an-tsary Fahmi Reza avy amin'ny polisy Malayziana noho ny famoahana ny sarin'i Razak ho toy ny mpanao hatsikana. Natao hitsikerana ny Lalànan'ny Fikomiana ao amin’ ny firenena ny lahatsoratra sy ny sary. Ho setrin'ny sary sy ny lahatsoratra nataon’ i Reza, dia nisioka taminy ny Foibem-Panadihadiana Misahana ny Famotorana an'ny Polisy an-tSerasera ary nilaza hoe: “Arahin'ny polisy maso akaiky ianao izao. Ampiasao ny maha-tompon'andraikitra anao amin'ny kaontinao sy araka ny lalàna. Niaro an'i Reza ny Grafik Rebel Untuk Protes & Aktivisme, ary nandrisika ireo mpanohana mba hisioka sary mpanao hatsikana miaraka amin'ny diezy #kitasemuapenghasut, na”mpampisara-bazana daholo izahay rehetra”. Ho setrin'ny fandrahonana, dia nanambara ny fanebahana ho toy ny endriky ny fanehoana kanto izay tsy maintsy “arovana amin'ny fomba rehetra” i Reza.
Notorian'ny lefitry ny mpampanoa lalàna noho ny fanehoan-kevitra nataony tao amin'ny Facebook i Evron Hughes, mpaneho hevitra mavitrika momba ny resaka ara-tsosialy sy ara-politika. Mikasika ny fifanarahana mampiadihevitra teo amin'i Ghana sy ny orinasa Vondrona AMERI ao Dubai ny lahatsoratra, izay voalaza fa nampitombo tafahoatra ny vidin'ny motera iray mandeha etona 10 ny governemanta Ghaneana.
Nahazo tehaka miely patrana tamin'ny aterineto ny Apple tamin'ity herinandro ity noho izy tsy nanaiky nandray ny fepetra nangatahan'ny FBI izay nolazain'ny orinasa fa mety manimba ny fiarovana ny rafitra fikirakirana iOS izany. Nanantena ho afaka miditra amin'ny iPhone ampiasain'i Rizwan Syed Farook, iray amin'ireo nahavita ny fitifirana tao San Bernardino tamin'ny Desambra lasa ny FBI, saingy tsy nanaiky ny Apple hatramin'izao, mitanisa fa hampididoza amin'ny lafiny fiarovana izany sy olana eo amin'ny lafiny ara-pitsarana. Tamin'ny 16 Febroary, namoaka fanambarana ho an'ireo mpanjifan'ny Apple ny Filoha Tale Jeneraliny, Tim Cook, izay manasongadinana ny fijerin'ity orinasan'ny teknolojia ity, fa ny fananganana rafitra fikirakirana tsy voaaro hamoahana ho azo vakiana ny soramiafina amin'ny iPhone tokana dia mety voalohany indrindra hanimba ny fiarovana an'ireo fitaovana rafitra fikirakirana iOS hafa an-tapitrisany ary faharoa, mety hametraka “maodely mampidi-doza” ara-pitsarana amin'ny alalan'ny fanitarana tafahoatra ny fahefan'ny governemantan'i Etazonia. Miombon-kevitra amin'izany ny ACLU, EFF sy ny maro ao amin'ny Reddit. Nandefa fanaraha-maso amin'ny alalan'ny FAQ (Fanontaniana sy Valiny) avy eo ny Apple, namaly ireo fanontaniana maro amin'ny fepetra noraisiny, namaly bontana tamin'ny alalan'ny taratasy misokatra am-pahibemaso ny talen'ny FBI. Ao anatin'ny adihevitra mafana momba ny fanafenan-tsoratra, ny fiainana manokana, sy ny fiarovam-pirenena, efa niteraka adihevitra fanampiny sahady ny fanambaran'ny Apple.
Nanampy tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity i Weiping Li, Hae-in Lim, ary i Sarah Myers West.